Ogaden News Agency (ONA) – Mudnaanta ma Qurbajoogbaa leh, Mise Muwaadiniinta Ogadenya? By Rooble Mohamed
Mudnaanta ma Qurbajoogbaa leh, Mise Muwaadiniinta Ogadenya? By Rooble Mohamed
Posted by ONA Admin	/ June 17, 2013
Maqaalka Todobaadkan oo aan Jeclaystay inaan Diirada kusaaro Xaqiiqda dhabta ah ee kajirta Ogadenia & Mala awaalka habow maraarinta ah ee Guumaysigu ujeexday shaxdeeda Qurbajoogta dadka isku sheega & Lahaystayaasha aan awooda ulahayn inay maqlaan Codka shacabka Ciillan, ee Ogadenya.
Waxaa marag madoonta ah in baryahan danbe siyaasada Guumaysigu noqotay mid ay wakhti iyo xoolo badan ku bixisay Erayga “QURBAJOOG” oo aad moodo In Qurba-joog ku sheego aysan u bislayn macnahiisa. Qurbajoog (Expatriate) hadaan kuu sifeeyo aragtidayda waa dad kasoo cararay dhib dalkooda ku haysta(Dhaqaale ama Siyaasad), qaxootina ku noqotay dhul shisheeye oysan lahayn. Dadka Qurbaha jooga ee u dhashay Ogadenia ma uusan keenin qurbaha Dagaal Sokeeye/Qabiil (Civil war) & Dawlad bu-burtay midnaba, balse waxaa sabab u ah Dhibaatada & Barakicinta Guumaysigu u gaystay shacabka aan waxba galabsan ee Ogadeniya.
Su’aasha aan iswaydiiyo ayaa ah hadiiba aad markii hore kasoo qaxday Guumaysi ood isku dhiibtay sidaa goormuu dalkaagii helay Xoriyad & Isbadal aad maanta ku hadaaqdo Wadanku Waa Nabad? Maxaa isbadalay? Jawaabta lawada ogyahay Waa Waxba.
Dadka isku sheega Qurba-joog ayaad moodaa inay iyagu wax ka doonayaan shacabka oo waxay kuugu sheekayn marka ay soo noqdaan waxaa la’isiiyay dhul & dhismo, hadiise uu ku jiri lahaa dareen wadaniyadeed waxay shacabkooda uga faa’iidayn lahaayeen meherado ay ka helaan nolol maalmeedkooda. Dhulkase ay leeyihiin waa nala siiyay yaa leh, soo dhulkoodii ay u dhasheen maha? Ta-labaad ma isweydiisay; Dhulka Lagu siiyay ma ahaa mid banaan mise waa dhul ay lahaayeen dad masaakiin ah oon awoodin inay dhistaan balse daganaa awoow ka awoow. Sow ma’aha arintaasi dhac cad oo badheedh ah loona gaysanayo dad Soomaalida Ogadeniya ah.
Shacabka Ogadenia markaad lahadasho waxay kuu sheegayaan inay u baahanyihiin Isbitaalo, Biyo, Dugsiyo & Wadooyin balse ayna iyaga cidna wax ka dhagaysan, ee Qurbajoogta oo kaliya wax laga dhagaysto. Akhristoow hadiiba qofkii ku nool dhulkiisa, meelana aan uga socon, ee u baahnaa adeegayaashaas kor kuxusan aan habayaratee dhag & Jalaq loo dhigayn, maxay tahay sababta Qurbajoog kusheeg wax looga dhagaysan oo hantidooda loogu dhici? Miyaysan ahayn arintaasi Guumaysi & Gardaro? Miyaanay ahayn in mudnaantii shacabka lahaa la siiyay Qurbajoog haysta dhalasho wadama kale? Miyaysan muujinaynin Gumaysi awood waayay oo kolba meel isku qaadaya?
Qurbajoogta ayaa noqoday mid ay u adeegaan xafiisyada Jig-jiga, oo lagu shubaa ama lagu cunaa lacago aad u faro badan si loo raali galiyo, iyaga oon u baahnayn raali galin, balse shacabka Ogadenya uu yahay midka u baahan raaligalin. Waa la yaabe mawaxaa xaq uleh in loo adeego Shacabka Ogadeniya, mase Nimanka jooga wadamada Xorta ah ee u jaad doonta Jigjiga? Xaaladda Gumaysiga iyo Maamulkiisa Jigjiga u fadhiya sow ma’aha –Colka wadhaf malagu dayay?
Waxaa loo Sameeyaa Qurba-joog kusheega Guryo qurux badan oo loogu magacdaro GURIGA MARTIDA halka dadkii shacabka ahaa laga burburinayo hoygoodii Jiingadda iyo Dargadaha ka samaysnaa. Balse looga dhigay guri ay u hoydaan Jeel Ogaden oo ay ku xidhanyihiin dad ka badan 4,000 oo aan haba yaraatee waxba galabsan. Waxaad Arkaysaa nin Isku sheegaya inuu yahay wasiir oo Dagida diyaaradaha u taagan qof la yidhi waa fanaan soo galay suu usoo dhaweeyo. Miyaysan ahayn Lafcad oo toobin lagu hayo? Masa waxaa jira wax qarsan oo daaha la saarayo.
Dadka hadaad la sheekeysato waxay kuu sheegayaan in Qurbajoog ku sheega ay noqdeen caqabada ugu badan ee taakada ku ah shacabka dulman ee Ogadenya iska daa inay faa’iido ka helaane. Oo meesha ay ka sugayeen inay Caawiyaan oo markay arkaan nolol maalmoodka Shacabkooda ay aad uga calaacalaan, iyagii ku noqday utun ay ka naxaan markay maqlaan Qurba-joog cusub ayaa timid.
Maqaalkan oo aan ugu magacdaray, Mudnaanta ma qurba joogbaa leh, mase Muwaadiniinta Ogadeniya? Ayaan ahayn Maqaal ku salaysan aragti, balse ka turjumaya xaqiiqada kajirta dhulka la Gumaysto ee Ogadenya. Waxaan kula dar-daarmayaa inay Qurba-joog ku sheega inay ka waantoobaan, kana xishoodaan dhibaatada ay ku hayaan shacabka masaakiinta ah, & Dhulka umadda dulman ee loo boobayo inay qaataan, iyadoo maalin aan maanta ahayn lagala xisaabtami doono Shakhsi kasta oo danbi ka galay shacabka aan haysan Xoriyad uu ku sheegto dhibkiisa. Inay ka fikiraan 6da Million ee ku nool Ogadenya halka ay ka fikireen Calooshooda iyo inta ka hooseysa.
Shacabka Ogadenya uma baahna dad qurbaha ka yimaada oo lasoo dhaweeyo, ee waxay u baahanyihiin in laga daayo dhibka, tacadiga, dilka & Xabsiyada aysan muutaysan ee loo taxaabayo, waana xisaab ku maqan Gumaysi Kal-kaalka oo ay kula xisaabtami doonaan Shacabka lacuna qabateeyay ee Ogadenya.